मन्त्रीले पेलेपछि घरमै आराम - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
22nd July 2018, Sunday
मन्त्रीले पेलेपछि घरमै आराम
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि औंला उठाए पनि अझैसम्म नेतृत्वले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाइरहेको छैन । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको असक्षमताकै कारण पछिल्लो समय बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य पातलिएपछि अर्थमन्त्रीले औंला उठाउन पुगेका हुन् ।
केही दिनअघि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी बैंकबीचको मर्जरको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘विश्वको वित्तीय प्रणालीमा फेरि एकपटक संकट आउन सक्ने देखिएको छ । त्यसका लागि हामी अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्छ । तर, त्यसका निम्ति केन्द्रीय बैंक सचेत देखिएको छैन । केन्द्रीय बैंक झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको नियमनका देखिएको कमजोरीले पनि त्यही कुराको संकेत गर्दछ ।’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘राष्ट्र बैंकलाई कारबाही गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग छ भन्ने कुराको हेक्का राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले राख्नुपर्छ’ भनेर पनि सो कार्यक्रममा बोलेका थिए । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझेर नै अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि खनिएको बताइन्छ । यसअघि, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको कारबाहीको फाइल लुकाउन काम भएको खुलासा गरेका थिए । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूबाटै त्यस्तो कार्य भएको संकेत गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको नियमन तथा निरीक्षण कार्य पछिल्लो समय कम हुँदै गएपछि त्यसप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । पहिला सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि नियमित रूपमा नियमन हुने गथ्र्यो तर डा. नेपाल गभर्नर भएपछि भने नियमन कार्य कम हुँदै गएको छ । असार मसान्त आउनै लाग्दासमेत एक तिहाइ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले नै नियमनमा बेवास्ता गरेको हुँदा यस्तो स्थिति आएको बताइन्छ ।
डा. नेपाल गभर्नर भएर आएपछि नियमन कार्यले सुस्तता लिएको हो । डा. नेपाल गभर्नर भएपछि नियमन कार्यलाई गति दिँदा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कारबाहीमा जाँदा माथिल्लो तहबाट दबाब आउने र आफ्नै आसेपासेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएकाले नियमन प्रक्रियालाई फितलो बनाएको बताइन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री तथा तत्कालीन गर्भनर डा. खतिवडाका पालामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनमा जाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू आचारसंहितामा बाँधिएका थिए । त्यतिबेला नियमनमा जाने कर्मचारीहरूले चिया र पानीबाहेक अरू खाँदैनथे । तर, अहिले भने नियमनमा जाने कर्मचारीहरूलाई बैंकहरूले पाँचतारे होटलको खाजाको व्यवस्था गर्ने गरिएको बताइन्छ । कर्मचारीहरूले पनि बैंकबाट राम्रो सत्कार र आतिथ्य पाउने गरेको हुँदा नियमन झनै फितलो बन्दै जान थालेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंक नेतृत्वले नियमन कार्यलाई फितलो बनाएपछि त्यसप्रति अर्थमन्त्री डा. खतिवडा असन्तुष्ट मात्र बनेका छैनन्, गभर्नर नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन दबाब पनि दिइरहेको बताइन्छ । अर्थमन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि गभर्नर डा. नेपाल अचेल राष्ट्र बैंकमा पूरा समय बस्ने गरेका छैनन् । उनी बिहान आएर हाजिर हुने र त्यसपछि दिनभरि घरमै गएर आराम गर्ने गरेको बताइन्छ ।
‘फ्री तिब्बत’को सभामा डीएसपी राई
आईजीको नाम भजाएर डीएसपीको फुर्ती
फसेको रकम उठाउन दौडधुप
बिमा समितिका चापागाईंलाई पद जोगाउन चटारो
आचार्यले पारे रेलवे विभाग अस्तव्यस्त
क्योकोसिनको नाममा अनियमितता
एआईजी बढुवा अझै लम्बिने
ह्यातको मनपरीमा मन्त्रीको मौनता
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेकपाको लगाम
एकताको कामलाई गति दिइँदै
लेनदेनमा मुछिएपछि हटाइयो आलमलाई
आन्तरिक कलहका कारण महासमिति अन्योलमा
काठमाडौं । भदौभित्र गर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक अनिश्चित- ...
डोलिडारका तिनीहरूकै ढलिमली
काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामीण कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को महानिर्देशकमा- ...
किन लम्बिँदै छ कर्मचारी समायोजन ?
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र- ...
नेकपाको विधान र नियमावली पारित
महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न ओली र प्रचण्डले पनि चुनाव लड्नुपर्ने काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन र अधिवेशनमा प्रतिनिधिमा- ...
अधैर्यको नमीठो स्वाद
आख्यान र गैरआख्यान दुवै विधाका किताबको अध्ययनमा गहिरो अभिरुचि राख्ने एक जना गम्भीर अध्येताले केही दिनअघि भने, ‘नेपाली लेखकहरूका एकपछि अर्को किताब फितला हुँदै गइरहेका छन् । लेखन- ...
हरेक समाज केही न केही विडम्बना, समस्या र द्वन्द्वमा जेलिएका हुन्छन् । त्यस्तो समाजभित्र बाँचिरहेका मानिसहरूका अनेक कथाव्यथा हुन्छन्, अनगिन्ति पीर, सन्ताप, व्यथा, खुसी र उल्लास- ...
काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट- ...
वाणिज्य बैंकको संख्या एक दर्जनमा झार्र्नेे तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या एक दर्जनमा- ...